Iibkii shirkada Saab oo diyaar noqday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maanta kowda ayaa shir jaraaiid lagu soo bandhigi doona cidii iibsatay shirkadan Saab. sawirle Foto: Scanpix
Iibkii shirkada Saab oo diyaar noqday
La daabacay onsdag 13 juni 2012 kl 08.25
Maanta ayaa iibka shirkada Saab ee mudada soo jiidanayeey la ogaaday iibsadaha shirkadaas dhaqaale xumidu soo food saartay. Hayada iibisa shirkadaha kacay ee ( Konkursförvaltarna ) ayaa maanta saacadu markay tahay koowda duhurnimo soo bandhigi doonta cidii iibsatay shirkadan.
Maanta ayaa lagu rajo wayn yahay in shirkadani ugu dambayntii hesho iibsade rasmi ah, sida ay sheegeen hayadan soo bandhigi doonta maanta cida iibsanaysa shirkadan, waa sida ay ku sheegeen fariin ay soo gaadhsiyeen saxaafada saaka oo ay helen idaacada Radio Sweden laanteeda P4 Väst.
Waxa la filayaa in shirkadan ay yeelan doonaan shirkada National Electric Vehicle Sweden,loona soo gaabiyo (Nevs) balse aanay ilaa hada shirkadani soo bandhigin iibka ay kula wareegayso shirkada Saab, taaso la filayo in lagu soo bandhigo maanta warsaxaafadeed saacadu markay tahay koowda duhurnimo.
Shirkadan gadanaysa Saab ee Nevs ayaa ka diiwaan gashan dalka ingiriiska waxaana qayb sheer ah ku leh shikada Sun Investment oo iyana laga leeyahay dalka Japan, balse ay shirkadani tahay mid laga leeyahay dalka Shiinaha.
Gudoomiyaha shirkadan Nevs ayaa lagu magacaaba Karl-Erling Trogen, oo hore u ahaan jiray madaxa shirkada Volvo, qaybteeda baabuurta waaweyn dhawaana loo magacaabay Kai Johan Jiang madaxa shirkadaas Volvo.
Shirkadan Saab Automobile ayaa dhaqaale xumo la soo darastay sannadkii 2011 bishii diisember 19-keedii, taaso ay xiita kacday shirkada yar ee ay lahaayeen ee Saab Powertrain iyo sidoo kale shirkadooda kale ee Saab Tools, dhamaantood ay kaceen.
Gudoomiyihii hore ee IF Metall ee shirkada Saab, Håkan Skött, ayaan shegay in aanu wali maqal wax la xidhiidha iibkan shirkada Saab, balse goor u la hadlayey wakaalada wararka ee TT sheegay in iibkani u yahay mid wacan soona dhaweeyay.
- Ha, waa runtii wax fiicaan oo farxad leh, ayuu sheegay, Håkan Skött, mar u la hadlayey TT.
Wararkii Saab in la Iibsadey oo la beeniyey
Dalabkii Gadashada Shirkadda Saab oo Maanta ku Eg
Hindia oo rabta iibka Saab
Shirkado Xiisaynaya shirkada Saab
Xaaladda shirkadda Saab oo weli xal loo helin
Shirkad Hindiya oo xiiseenaysa Saab
Shirkadda Saab oo Busaarad la Geliyey
Faallooyin laga Bixiyey Shirkadda Saab
Xaaladda Shirkadda Gawaarida ee Saab
Dib u Habeeynta Shirkadda Gawaarida ee Saab
Qareenkii Dib u Habeeynta Shirkadda Saab oo is Casilay
Saab oo Dhaqaale Hor Lihi soo Gaaray
Xagguu ku Dambeeyn Mustaqbalka Shirkadda Saab